सि जिङपिङ फर्किएकै रात प्रचण्डले गरे खतरनाक घोषणा, ओलीलाई तनाव ! – ईमेची डटकम
Posted byइमेची संवाददाता October 14, 2019 October 23, 2019 Leaveacomment on सि जिङपिङ फर्किएकै रात प्रचण्डले गरे खतरनाक घोषणा, ओलीलाई तनाव !
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अचम्म लाग्दो घोषणा गरेका छन् । उनले राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि नरहेको बताउँदै कांग्रेससँग पुनः सहकार्य हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आउँदा मलाई सहयात्रीहरुकै बीचमा आएको महसूस हुन्छ । तपाईंहरुसँग आउँदा सहयागीहरुसँगै भेटघाटमा आएको महसूस हुन्छ । हेर्दै जाऊँ आगामी दिनमा राजनीतिले कसरी कोल्टो फेर्दै जान्छ रु
Posted byइमेची संवाददाता October 14, 2019 October 23, 2019 Posted inसमाचार